EMMANUEL ADEBAYOR OO NOQDAY XIDIGA AFRICAN FOOTBALLER OF THE YEAR | Toggaherer's Weblog
Lagos 12 Feb,2009 Togaherer
Weeraryahanka kooxda Arsenal Emmanuel Adebayor ayaa loo magacaabay xidiga sanadka ee Qaarada Africa (African Footballer of the Year) marki ugu horeeysay kadib xaflad ka dhacday magaalada Lagos ee dalka Nigera.
Ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Togo ayaa kaga guuleysatay abaalmarintan xidiga khadka dhexe uga ciyaara xulka Ghana iyo kooxda Chelsea Michael Essien iyo laacibka Khadka dhexe xulka Masar Mohamed Aboutrika,kadib markii ay codadkooda siiyeen tababarayaasha xulalka kubada cakta Africa iyo kabtanada.
Ciyaaryahankan ka tirsan kooxda Arsenal ayaa ku muteystay abaalmarintan goolashii uu ka dhaliyey sanadkii 2008-dii horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League-ga iyo doorkii uu ka qaatay in xulkiisa Togo ay gaadhaan wareega kama danbeysta ah ee is reeb reebka Koobka Aduunka ee 2010-ka lagu qaban doono dalka South Africa.
Adebayor, oo25-sano jir ah ayaa u dhaliyey kooxdiisa Arsenal 24 gool gaar ahaan horyaal Ingiriiska xili ciyaareedki lasoo dhaafay halka xulkiisa Togo uu u dhaliyay 4 gool sadex kulan oo caalami ah oo uu u saftay.
Xidiga qadka dhexe ee xulka Masar,Mohamed Aboutrika ayaa loo doortay ciyaaryahanka ugu wanagsan xidigaha ka ciyaara gudaha Qaarada Africa halka weeraryahanka kooxda Chelsea iyo xulka Ivory Coast Salomon Kalou,loo magacaabay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dhalinyarada Africa.
Xafiiska Ciyaraha Togaherer
WRITTEN : MAXAMED A NUUR